Vonona ho amin'ny fanambadiana ve ianao? (1 Kor. 13:4-8)
Catégorie : Lesona 3: Miomana ho amin’ireo fiovana goavana eo amin’ny fiainana
Iray amin'ireo fiovana goavana indrindra atrehin'ny olona iray ny fanambadiana. Marina fa tsy ny olona rehetra no mandeha manambady. I Jesôsy tokoa mantsy dia tsy nanambady mihitsy, ary toy izany koa ny olona maro ao amin'ny Baiboly. Na izany aza, tena manambady tokoa ny ankamaroan'ny olona. Koa manan-javatra manan-danja maro holazaina momba ny fanambadiana ny Baiboly.
Fantatrao ve fa ny fandaminana ara-piarahamonina voaresaka voalohany indrindra ao amin'ny Baiboly dia ny fanambadiana? Tena manan-danja amin'Andriamanitra ny fanambadiana, hany ka ireo teny izay nolazainy tamin'i Adama sy i Eva momba izany dia miverina any amin'ny toerana telo hafa ao amin'ny Soratra Masina: "Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny; dia ho nofo iray ihany ireo." - Gen. 2:24 (jereo koa ny Mat. 19:5;Mar. 10:7; ary Efes. 5:31). Milaza amintsika ireo andalan-teny ireo fa vantany vao manambady ny olona iray, dia ny vadiny no tokony ho olona manan-danja indrindra eo amin'ny fiainany. Tokony hotiaviny mihoatra noho ny ray aman-dreniny mihitsy aza izany vadiny izany. Anisan'ireo antony mahatonga ny fanambadiana ho tena manan-danja amin'Andriamanitra ity: maneho ny fifandraisana eo amin'ny Zanany, dia i Jesôsy sy ny fiangonana izay fofombadiny ny fanambadiana (Efes.5:32).
Mialoha ny hanangananao trano, dia tsy maintsy mipetraka aloha ianao ka mandinika ny sarany (Lio. 14:28-30). Koa tsy tokony hihoatra noho izany ve ny fandinihana mialoha ny fanorenana tokantrano? Manorina trano amin'ny biriky, hazo, metaly, vy, tariby, ary fitaratra isika. Ny tokantrano kosa aorina amin-javatra tsy ary ho hitantsika na azontsika tsapain-tanana mandrakariva.
Inona ireo zavatra ilaintsika mba hanorenana fanambadiana maharitra? Nahoana no ilaintsika mba hahonnbiazana eo amin'ny lafim-piainana rehetra koa izany?
Ahoana no iomanantsika ho amin'ny fanambadiana? Tsy maintsy manomboka amintsika isam-batan'olona izany fiomanana izany. Eo an-danin'izay, ilainao ny mijery tsara izay ho vadinao raha toa ka tena ho mpanampy tandrify tokoa izy. Miasa tsara ve izy? (Ohab. 24:30-34). Mora tezitra ve izy? (Ohab. 22:24). Mitovy foto-pinoana ve ianareo roa? (2 Kôr. 6:14,15). Tia io olona io ve ny fianakavianao sy ny namanao? (Ohab. 11:14). Inona ireo zavatra mifehy ny safidinao? Miankina amin'ny finoanao ve ianao sa amin'ny fihetseham-ponao fotsiny (Ohab. 3:5,6). Afaka manampy anao hanana fanambadiana sambatra ny valin'ireo fanontaniana ireo.